Ngo-2005, omunye Frankfurt Motor Show iqembu Japanese abadumile wethulwa emphakathini hatchback yayo entsha ebizwa nge "Mitsubishi Lancer". Izibuyekezo abanikazi kanye nochwepheshe ngalokhu imoto uthi imoto umqondo (ie imoto esethulwa emihlanganweni motor show) baba yezemidlalo kakhudlwana futhi ashukumisayo. Naphezu DEBUT yimpumelelo futhi lemiqulu emikhulu yokuthengisa, eqinisweni, ngaleso sikhathi inkampani ayedabula izikhathi yayo best. Iqiniso lokuthi sezomnotho esimanzonzo emhlabeni buye baphoqa isitshalo ukunciphisa amavolumu ukukhiqizwa futhi hatchback "Mitsubishi Lancer" abasoze bakwazi phezu elihambayo. Ngenhlanhla, icala inkampani kancane kancane ngcono, futhi ekupheleni kuka-2008, le izimpahla lokuqala seshumi ka hatchbacks kufika emakethe European. Manje imoto ngenkuthalo ithengiswe eRussia, ngakho kulesi sihloko sizobheka zonke izinguquko eziye wathinta hatchback olusha "Mitsubishi Lancer".
Izibuyekezo nabanikazi, bese ubhekisisa ukubukeka imoto
Lapho "Lancer" omusha ngokushesha efika engqondweni ukuthi lo mshini yakhelwe nje ukushayela endleleni, futhi ukundiza phezu ubuso bayo. izici ehlukile ye isizukulwane esisha "Mitsubishi" kuyinto design zanamuhla izici ehlukile sokunciphisa umoya lapho zindiza. Engemuva iphiko, phambili lobani amapuleti - kwakubonakala kuphele konke esidalelwe imoto ayegijima komgwaqo, efana projectile. Ngo obschom, sportiness likhona lapha ingxenye yomzimba ngayinye.
By endleleni, ngenxa yokuthi ukuthi hatchback Unomzimba esifushane kuka sedan, onjiniyela bakwazile kuzuzwe ozinzile impela design "yisithunzi nokuhleleka kwezakhiwo" futhi "impumulo" imoto, okuyinto kakhulu ezingavamile izimoto enomzimba hatchback.
Photo "Mitsubishi Lancer" ngaphakathi:
Manje ngenxa Ukubuyekeza wezangaphakathi. Ivula umnyango somshayeli, ungakwazi ngokushesha ubone ingaphakathi enamandla, enesihluku nolaka. Nakuba hhayi ngaphandle umqondo womunye entsha "Mitsubishi Lancer". Izibuyekezo abanikazi baphikisa ngokuthi igugu uye waboleka ithuluzi panel kanye isondo lesikhumba esasigoqiwe eliphethe i Suv imodeli Outlander XL. Nakuba aliveli njengoba emhlanganweni wesifunda ukusebenza ingaphakathi. Cha, kwenzeka okuphambene - wensimbi ukukhanyisa ibhodi kunezinqubo eziningana kukhanya ukuze umshayeli ngeke ziwuchithe amehlo akho lapho ebuka umshini wokubonisa izinga lejubane ngokukhazimulayo ovuthayo kanye tachometer. ikhanda Gear kuyinto ngempela elula. Amalungu we "Mechanics" is sisheshe sizazise.
"Mitsubishi Lancer": ukubuyekezwa abanikazi izici lobuchwepheshe
Imoto ifakwe umthamo iyunithi esasiphethwe 143 "amahhashi" kanye ivolumu zokusebenza 1800 cubic ngamasentimitha. Ukubheka injini ukusebenza obunesizotha Yiqiniso, nanoma sportiness futhi kungaba kungabaza. Nge "okuzenzakalelayo" umshini ngiphakamisa "amakhulukhulu" ngemizuzwana 12 nje. Ngo manual transmission izinkomba-2 noma ngaphansi. Ubuningi efanayo isivinini hatchback "Mitsubishi Lancer" ingeqi uphawu 196 amakhilomitha ngehora. Inzuzo kuphela nenjini ongaphakeme-mandla iyona kuphela petrol ezincane, okuyinto mayelana 8 amalitha ngamunye amakhilomitha angu-100.
"Mitsubishi Lancer" - intengo
Izindleko a hatchback entsha eRussia zokhahlamba kusuka ruble 710 kuya kwezingu-750. Nokho, kukhona okunye ukukhetha: I-ruble ayizigidi 845 .. ungakwazi ukuthenga enhle, futhi abonakala nolaka "ubuso ezikhangayo". Sikhuluma imoto ekuklanyweni eqolo Olukhulu, ifakwe ohlangothini ozikhethela kwesihenqo airbag, amasondo ingxubevange, uhlelo eziphambili umsindo nokulawula sezulu.